Petrozavodsk State University - Study in Russia. EducationBro
Country : Ruush Federation
gaabinta : PSU
aasaasay : 1940
Ardayda (qiyaastii.) : 16000
Ha iloobin in aad wada hadlaan Petrozavodsk State University
Qorto Petrozavodsk State University
University PetrSU la aasaasay 1940 sida Finnish-Karelia University iyo faa'iiday magaceeda la joogo ee 1956. Intii ay taariikhda 75-sano PetrSU uu noqday jaamacada ugu weyn ka mid ah Waqooyi-Yurub ee Russia iyo tababaray in ka badan 60000 ardayda. Waxaa si guul leh isku dhaqan waxbarashada classical iyo sayniska aasaasiga go'aanka cusub ee beeraha ee farsmada sare horumarka sayniska.
PetrSU ayaa dhowr Qalinjabiyeyaasha caan ah, oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo qudbad gabayayaashiinnu. Waxaa si joogto ah ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan ee Russia kaalinta sida ay qiimeynta kala duwan (GreenMetric University World saraysiinta - meel 2aad ka mid ah 100 jaamacadaha ugu wanaagsan Russia; «Interfax» iyo «Ekho Moskvi» rating qaran madax banaan ee category internalization ah - meel 3aad, iwm)
Jaamacadda degan 8 dhismayaasha magaalada oo dhan iyo hawl beer Botanic, a dabaasha «Onego», dhowr laboratories iyo guri soo bandhiga. Its maktabadda haystaa wadar ahaan ku xeeran 1.4 million buugaagta. PetrSU waxa uu ku yaalaa Petrozavodsk, laakiin waxaa kale oo ay leedahay laan in Apatity, magaalada ee gobolka Murmansk ee.
Maanta in ka badan 14800 ardayda fasalada ku dhigtaan undergraduate kala duwan, qalin iyo post-graduate barnaamijyada. Waxay waxaa la baraa in ka badan kun Professor, lugu daro 550 PhD, 145 Dhakhaatiirta of Science, 26 xubno ka mid ah tacliinta sare ee gobolka of science.
Jaamacadda wuxuu ka kooban yahay 80 waaxyaha, 9 Caqlina, 7 machadyada waxbarasho iyo 8 machadyada cilmi.
Qayb CITY IYO REGION
Jaamacadda kaalin firfircoon ka qaataan waxbarasho sare oo dheeraad ah ay heli karaan dadka ku nool degmooyinka outland of Karelia iyo gobolada u dhow. Degmada kasta waxaa loo xilsaaray in ay awood ama machadka iyo ardayda magaalooyinka yar yar ama tuulooyinka codsan kartaa waxbarashada u shaqayso oo maal-ah. Ardayda dugsiyada Petrozavodsk, lyceums iyo jimicsi iman karin gaar ah tababar pre-jaamacadeed si ay beerta mustaqbalka waxbarashada.
PetrSU qaadataa qayb abaabulka iyo qabashada Imtixaanka Gobolka Midaysan (ISTICMAALKA), taasoo ku soo jirtay foomka ugu weyn ee imtixaan qalin dugsiyada iyo foomka ugu weyn ee imtixaan hordhac ah jaamacadaha ku yaalla Russia for soo dhaafay 10 sano. guryaha The jaamacad Regional ISTICMAALKA Center, kaas oo ka baaraandega natiijada baaritaanka iyo la talinta bixisaa online macalimiinta iyo ardayda.
PetrSU waa xarun la aqoonsan yahay cilmi beerihii barnaamijyada, IT, cilmi plasma, microelectronics, xisaabta, physics, sayniska caafimaadka, biology, taariikhda, philology, cilmiga siyaasadda iyo arrimaha bulshada, sharciga, dhaqaalaha, dhismaha, kaymaha, agriculture. In ka badan 60 gobolka, Shirarka qaranka iyo kuwa caalamiga ah waxaa la qabtaa sanad walba, ka badan 300 mashaariicda gobolka iyo gaar loo leeyahay maal-galiso in xarumaha sayniska iyo waxbarashada ayaa la fuliyay, iyo daraasiin monographies, buugaagta iyo Tilmaame oo la daabacay.
ISKAASHIGA / xiriirka caalamiga ah
Muddo sanado ah PetrSU ayaa ahayd mid aad u firfircoon saaxadda caalamiga. Maanta in ka badan 200 ardayda caalamiga ah ka USA, Europe, Shiinaha iyo waddamada kale ee ka barato jaamacadda, iyo 10 Professor dalal kala duwan baro at PetrSU.
Waxaa jira 6 Barnaamijyada sayidkiinna oo ku qoran luqadda English bilaabey 2015: «Adeegyada iyo Shabakadda Nidaamyada», «Barbardhiga Policy Bulshada iyo Daryeelka», «Caafimaadka Dadweynaha», «Dalxiiska Management», «Studies Nordic: Language, Dhaqanka iyo taariikhda »iyo« Spintonics ». ardayda shahaadada hoose dooran kartaa shahaadada bachelor ah ama ku takhasusay ee.
Jaamacadda waxay leedahay 87 heshiisyada caalamiga ah firfircoon leh 27 dalalka (Finland, Sweden, Norway, France, Germany, Portugal, Boqortooyada Ingiriiska, United States of America, Canada, Belgium, Kuuriya, dalalka gobolka bari, iwm) iyo barnaamijyada exchange caalami ah ayaa bilaabay la 20 jaamacadaha shisheeye. 30 mashaariicda caalamiga ah, waxay sannad kasta lagu qabto iyada oo taageero dhaqaale ee lacagaha caalamiga ah ee kala duwan, barnaamijyada iyo ururada (US, EBRD, USAID, CRDF, IREX, Daad, CIMO).
unugyada PetrSU International waxaa ka mid ah Institute of International Programs, Xarunta Midowga Yurub ee gobolka Barents ee Russia, International University Summer, Barnaamijyada International Center Tababarka Specialist, PetrSU Metso Center, PetrSU Nokia Center iyo PetrSU Ponsse Center. Institute of barnaamijyada caalamiga ah hoy Atlantic iyo Iskaashiga Center Asia, Midowga Yurub Information Center iyo Xarunta Waxbarashada Caalamiga ah.
Jaamacadda wuxu la shaqeeyaa UNESCO, University of Arctic ah, Group Working Joint on Waxbarashada iyo Cilmi-baarista ee Euro-Arctic gobolka Barents, Guddiga Qaranka ee Waxbarashada Finland, International Association of Finno-Ugric Jaamacadaha, Association of Open Innovations FRUCT, Barents Peace Network Waxbarashada.
Saddex Xarumaha Language jaamacadda siiyaan fursad ay ku gudbin imtixaanka luqadda ee soo socda:
cows (Test of Ruush sida Luqadda Dibadda)
TOEFL (Test of English Language sida a Dibadda)
go'yaal (Test of Legal Ingiriisi Skills)
Guryaha ARDAYDA CAALAMIGA AH
ardayda International leeyihiin fursado dhowr guri uu ka soo xusho, ka mid ah kuwaas oo ah guryo kiro, qolalka hotel / hostel ama ku nool qoys ay marti u. Doorashada ugu caansan inkastoo waa kuleejo ardayga. PetrSU leeyahay 10 dhismayaasha kuleejo kala firdhiyey magaalada oo dhan. jaamacad ma laha campus weyn, laakiin waa u fududahay in ay gaaraan ka kuleejo kasta via gaadiidka dadweynaha. dhismayaasha oo dhan ay helaan internet, cuntaqda iyo hoolalka waxbarasho, jimcsado. Waxa kale oo ku qalabaysan Makiinadaha dhar dhaqidda iyo shooladaha.
Institute of Languages ​​Dibadda
Institute of History, Siyaasadda iyo Bulshada Sciences
Institute of Kaymaha, Engineering iyo Dhismaha Sciences
Institute of Management Deegaanka Waqooyiga Yurub
Machadka Waxbarashada iyo Phycology
Institute of Education Physical, Sport iyo Dalxiiska
Machadka Regional Karelia of Management, Dhaqaalaha iyo Law of PetrSU (KRIMELTE)
Institute of Barnaamijyada Caalamiga ah
Institute of Education Sii
Kuliyada Macdanta iyo cilmi dhul
Kuliyadda Xisaabta iyo Information Technologies
Kuliyada Physics iyo Technology
Kuliyada Ecology iyo Biology
Thanks to shaqada isku dubaridan oo ka mid ah macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee jaamacad, bilowga ah ee 1970 maamulka Gobolka University Karelia-Finnish noqday nin aad u weyn oo ka Republic of Karelia iyo qayb ka mid ah waqooyi-galbeed oo dhan oo dalka ah.
In 1973 Mikhail Shumilov noqday Raktarka cusub ee jaamacadda. Iyadoo PhD ah ee Taariikhda, uu si fiican u yaqaan for monographs uu ku saabsan taariikhda Karelia iyo Waqooyiga Yurub.
In 1975 Waaxda cusub ee Accounting furay Jaamacadda sida qayb ka mid ah School of Mathematics iyo Physics. Sababta ugu weyn ee loogu talagalay furitaanka waaxda intaasu waxay ahayd la'aanta ah ee xisaabaadka iyo dhaqaaleyahannada ah ee Karelia. fasalka koowaad ee ardayda xisaabinta qalin 1979 oo ka koobnaa 52 takhasusay dhallinyarada. In 1980 Dugsiga Dhaqaalaha oo la furay. Waxay ka koobnayd saddex waaxyaha: siyaasadda dhaqaalaha, xisaabaadka iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale, iyo dhaqaalaha sectorial. hormuudka koowaad ee School ahaa S. N. Polyakov iyo in 1982 uu bedelay A. G. Rusakov
Si loo kordhiyo ay caanka ah ee Jaamacadda ka mid ah ardayda, waaxyaha iyo dugsiyada ee Jaamacadda saaray wax badan oo dadaal in qaybinta macluumaadka ku saabsan jaamacadda ee Karelia iyo meelaha la jaarka ah. Intaa waxaa dheer, tiro ka mid ah koorsooyinka tababarka gaarka ah (qoranayaan ku saabsan 1,800 dadka) ayaa abaabulay. macalimiinta Jaamacadda abaabulay kulan la ardayda dugsiga sare halkaas oo ay ku hadlay oo ku saabsan fursadaha ardayda ku heli lahaa ee jaamacadda. Waxa loogu yeero “Open Door Days” si joogto ah ayaa la abaabulay. Sidaas darteed, tartanka gelitaanka koray oo ku saabsan 2.3 ardayda per booska la heli karo.
fiiro gaar ah la siin jiray in ay horumar ka mid ah heerka shahaadada macallinka. Macalimiintu waxay hadda qaadan kartaa fasax dheeraad ah si ay u helaan sayidkiinna iyo phD (PhD) degrees. Jaamacadda lahaa 40-50 ardayda ka qalin sannad kasta.
In 1970 fiiro gaar ah ayaa sidoo kale la siiyaa qalab farsamo ee jaamacadda. Siddeed fasal ahaayeen qalabaysan in ay soo bandhigaan filimaan iyo laba fasal noqday laboratories luqadda. fasallada Computer ayaa sidoo kale la casriyeeyay iyo kombiyuutarada qarnigooda saddexaad u ES-1022 iyo ES-1035 ayaa lagu rakibay.
PetrSU ahaa mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeeya in la fuliyo barnaamij isku dhafan ee Wasaaradda USSR ee Tacliinta Sare u yeedhay “ICS-jaamacadeed”. Si loo hagaajiyo shaqada ee jaamacadda, cilmi jaamacadda horumariyo tiro ka mid ah nidaamka software oo ay ku jiraan “soogalooti”, “Number of ardayda”, “kalfadhiga”, “control hadda”, “dhaqanka bulshada iyo siyaasadda,” “arday ka qalin,” “Control of fulinta go'aanka”, iyo “Human Resources Shaqaalaha”.
Laga soo bilaabo 1970 ilaa 1985, ku dhowaad 14300 ardayda ka qalin Jaamacada.
Ma rabtaa wada hadlaan Petrozavodsk State University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Petrozavodsk State University on Map
Photos: Petrozavodsk State University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Petrozavodsk State University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Petrozavodsk State University.
jaamacadaha kale ee Federation Ruush
First Moscow State University Medical Moscow
Volgograd State University Medical Volgograd
Southern University Federaalka Rostov
Woqooyi Galbeed University Medical State Saint Petersburg